तपाइँ सोच्नुहुन्छ भन्दा कम पैसाको लागि बैंककको लागि आँधीबेहरी यात्रा समाचार
नाम दिइएका र 'स्वर्गदूतहरूको शहर' को रूपमा चिनिन्छ, बैंकक थाईलैंड को राजधानी हो। दुबै कला संसारमा र सामाजिक वा राजनीतिक मा ठूलो प्रभाव संग, यो पनि पर्यटक को विशाल बहुमत को लागी एक मनपर्ने गन्तव्य हो। त्यसैले गर्दा आज, तपाईं आफैले आफूलाई योग्य ठुलो व्यवहार दिन सक्नुहुन्छ।
हामीले भेट्टायौं दुई दिन भन्दा थोरैको बिजुली यात्रा, एक अद्भुत मूल्य को लागी। यो सत्य हो कि सायद ब्या Bang्ककले हाम्रो लागि भण्डार गरेका सबै चीजहरूको प्रशंसा गर्न लामो समय होइन, तर हामी यस किसिमको प्रस्ताव छुटाउन सक्दैनौं। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ हामी केबारे कुरा गर्दैछौं भने पढिरहनुहोस्।
1 बैंककको लागि बजेट उडान
2 बैंककमा धेरै सस्तो होटल
3 बैंककमा के हेर्ने
3.1 रयल पैलेस
3.2 वाट फो मन्दिर
3.3 वाट अरुण मन्दिर
3.4 Phraya नदी संग पैदल
3.5 सडक स्टालहरूमा खानाको मजा लिनुहोस्
बैंककको लागि बजेट उडान
किनकि यो बढ्दो भ्रमण गरिएको गन्तव्य हो, यस क्षेत्रमा यात्राहरू सस्तो छैनन्। थप रूपमा, हामीले यो थप्नु पर्छ उडान घण्टा कि हामी हाम्रो देश बाट छ। हो, यो लामो यात्रा हो तर यो यसको लागि लायक हुन्छ। त्यसकारण सबै साहसी मनोभावहरूले हामी तिनीहरूलाई के भन्न खोजिरहेका छौं भनेर अस्वीकार गर्न सक्दैन।
तपाईं ढिलो सम्म रहन छ, तर हामी भन्छौं, मूल्य पनि निद्रा गायब हुन्छ। हामी बाहिर जान्छौं म्याड्रिडबाट बैंकक सम्म बिहान २::2 बजे। यो भनिनुपर्दछ कि मार्गको स्टपओभर छ, त्यसैले हामी २ 55 घण्टा उडानको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। त्यसोभए, आगमन प्रस्थान भन्दा फरक दिन हुनेछ। अवश्य पनि, यस अवस्थामा चेक गरिएको सामान सामेल छ। फिर्ती दुई दिन पछि बिहान लिन्छ। यी सबै 25 371१ यूरो को मूल्य को लागी। हामी अरू के सोध्न सक्छौं? यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईले चाँडै नै बुक गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम समय.
बैंककमा धेरै सस्तो होटल
यदि उडान हो भने, होटेल पछाडि छोड्न सकिँदैन। यसैले हामीले एउटा छनौट गर्यौं जुन सस्तो मूल्य हुनेछ। प्रश्न मा होटल हो 'मजेस्टिक सुइट्स होटल'। यो सुखमविट स्ट्रिटमा अवस्थित छ, नाना बीटीएस स्टेशनबाट केवल १० मिनेट पैदल। हो, यो सुवर्णभूमि एयरपोर्टबाट २० किलोमिटर टाढा छ। तर हामी भन्छौं, यो मौसम राम्रोसँग अवस्थित छ।
साथै, यो एक महान मनोरन्जन क्षेत्र मा सहि छ। यो स्थानमा नाइटक्लबहरू र पसलहरू मुख्य हुनेछन्। राम्रो वातावरणले तपाईंलाई चकित पार्नेछ। को पैसा को मूल्य मा राय तिनीहरू पनि धेरै राम्रो छन्, त्यसैले तिनीहरू हाम्रो लागि आवश्यक स्थान हो। यस होटलमा तपाईं ११ रात मात्र खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ यसलाई प्रदान सबै को रूप मा आकर्षक लाग्छ भने, तब तपाईं मा आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ eDreams.
बैंककमा के हेर्ने
अनिवार्य रोक्ने भन्दा बढी मध्ये एक, यसले रोयल दरबारमा पुग्दैन। मोटामोटी रूपमा हामी यो भन्न सक्दछौं कि यो मन्दिरहरूको साथ साथै एन्क्लोजरहरूको पनि सेट हो। तिनीहरू भित्र, हामीले को महिमाको प्रशंसा गर्नु पर्छ 'पन्ना बुद्धको मन्दिर'। यद्यपि यो नाम बोक्छ, यो वास्तवमै मन्दिर भन्दा चैपलको हो।
वाट फो मन्दिर
यो एक ठूला मन्दिरहरू मध्ये एक हो र यो पनि अवस्थित छ जहाँ रोयल दरबार छ। को बुद्ध मूर्तिहरु तिनीहरू यसमा भइरहेका छन् र भनिन्छ कि हामी १००० भन्दा बढी भेट्टाउन सक्दछौं। ती मध्ये एउटा हो जुन हाम्रो ध्यान सँधै केन्द्रित गर्दछ। ती मध्ये rec 1000 मिटर लामो लामा बुद्धको हो।
वाट अरुण मन्दिर
नदीको अर्कोपट्टि, यद्यपि शाही दरबारको अगाडि, हामी यो अर्को मन्दिर भेट्टाउनेछौं। सत्य यो हो कि तपाईं भित्री पहुँच गर्न सक्नुहुन्न, तर बाहिरबाट यात्रा गर्नु हाम्रो अर्को दुई दिनको यात्रालाई कभर गर्नु पर्ने उत्तम विचार हो।
Phraya नदी संग पैदल
यो नदी बैंकक पार गर्ने कार्यमा छ। त्यसोभए, केहि मन्दिरहरू अवलोकन गरिसकेपछि र यस क्षेत्रको वातावरणको आनन्द उठाइसकेपछि त्यहाँ विश्राम गर्ने जस्तो केही छैन Phraya नदी। त्यहाँ एक राउन्ड ट्रिप डु boat्गा हुन्छ जुन प्राय १० मिनेटमा छुट्छ। त्यसैले यो प्राप्त गर्न गाह्रो छैन। तपाईंले जान्नुपर्दछ कि प्रत्येक तरिकाले यसको लागि लगभगbbaht खर्च लाग्दछ कि परिवर्तन केवल केही सेन्टहरू मात्र हुनेछ।
सडक स्टालहरूमा खानाको मजा लिनुहोस्
अर्को ठूलो खुशी घर बाहिर खानेकुराको लागि सक्षम भइरहेको छ। यो सत्य हो बk्ककमा खाऊ यो महँगो छैन। जहाँ रेस्टुराँहरू छन् जुन केवलeयूरो भन्दा कमको लागि तपाईं एक ठूलो डिश र पेयको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तर अझै, सडक स्टॉलहरू जहिले पनि अर्को उत्तम विकल्पहरू हुन्छन्। याद गर्नुहोस् कि ती मसलाहरूलाई धेरै दिइन्छ, यदि तपाईंलाई यो धेरै मनपर्दैन भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » बै think्ककमा आँधीबेहरीको यात्रा तपाईलाई सोचे भन्दा कम पैसाको लागि
सलामान्कामा के हेर्ने